July 27, 2019 - CeleLove
စနေနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေရဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်နဲ့ သူမတူတဲ့ထူးခြားချက် (၁၀) ခု
July 27, 2019 Cele Love 0
စနေနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေရဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်နဲ့ သူမတူတဲ့ထူးခြားချက် (၁၀) ခု စနေနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေဟာ တခြားနေ့ဖွားတွေနဲ့မတူတဲ့ မွေးရာပါထူးခြားချက်နဲ့ ပင်ကိုယ်အကျင့်လေးတွေရှိပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ စနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေရဲ့ ထူးခြားချက် (၁၀) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် …. (၁) စနေနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေဟာ အရာရာတိုင်းကို စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အများရဲ့ယုံကြည်အားထားမှုကိုခံရတဲ့သူတွေလေးတွေပါ …။ (၂) […]
နေ့ခင်းကြောင်တောင် လမ်းလည်ခေါင်မှာ ပိုက်ဆံအိတ်လုပြေးတဲ့သူ CCTV မှတ်တမ်း (ရုပ်သံ)
နေ့ခင်းကြောင်တောင် လမ်းလည်ခေါင်မှာ ပိုက်ဆံအိတ်လုပြေးတဲ့သူ CCTV မှတ်တမ်း (ရုပ်သံ) လမ်းသွားလျှင်​အားလုံးသတိရှိ ရှိသွားလာသင့်ပါတယ် …။ ခု လိုဖြစ်ရပ် မျိုးတွေဟာ မကြာခန ဖြစ်ပွားတတ်လေ့ရှိပြီး အခက်မသင့်လျှင် အသက်အန္တရာယ်ပါ ဆုံးရှုံး သွားနိုင်ပါတယ် …။ ဒီက​နေ့မနက်​ ၆ နာရီခွဲ​လောက်​ လမ်းမတော် ၁၂ လမ်း […]
ဦးပိန်တံတားအနီးက မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်.. မင်္ဂလာပါ စာရှုသူတို့ခင်ဗျာ.. အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဦးပိန်တံတားအနီးက “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …. ။ ဒီဆိုင်တာဝန်ခံက မြန်မာဖြစ်ပြီး၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ တရုတ်အစားအစာသာ […]
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ 28.7.2019 မှ 3.8.2019 ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း… ဆရာ မင်းသိင်္ခရဲ့ 28.7.2019 မှ 3.8.2019 ထိ တပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် …. ။ ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း […]
ဖောက်ပြန်တဲ့ယောင်္ကျားရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုဖြတ်ပြီး အက်စစ်ထဲစိမ်ကာ အိမ်သာထဲ လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး… တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုကောင်းကောင်းရနေလောက်ပြီလို့ ဆိုရလောက်အောင် သူ့ဘ၀မှာဘယ်တော့မှပြန်ပြင်လို့မရနိုင်လောက်မယ့် နောင်တရစရာပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေးဆပ်ခဲ့ရပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ကွာရှင်းပြီးသားမိန်းမက အိမ်ထောင်ကျစဉ်တုန်းကဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့သူ့ကို ကောင်းကောင်းကြီးလက်စားချေလိုက်လို့ပါပဲ … ။ သူရဲ့အရင်မိန်းမဖြစ်တဲ့ လီလို့အမည်ရတဲ့မိန်းမဟာ သူတို့အိမ်ထောင်ကျခဲ့စဉ်တုန်းက ယောင်္ကျားဖြစ်သူဖောက်ပြန်ခဲ့တာကိုသိပြီးနောက်မှာ ဒေါသအရမ်းထွက်သွားခဲ့ပြီး ကတ်ကြေးနဲ့ယောင်္ကျားဖြစ်သူရဲ့လိင်အဂါင်္ကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ […]
သားဖြစ်သူက တရားရုံးမှာတရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းခိုင်း… (ရုပ်သံ)
သားဖြစ်သူက တရားရုံးမှာတရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းခိုင်း… (ရုပ်သံ) သားဖြစ်သူက အမေကို တရားရုံးမှ တရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းခိုင်းတာ စစ်ကိုင်းမြို့ အိုးတန်းကလေးလမ်း မင်းလမ်းရပ်ကွက်မှာပါ …. မိခင် ကို ချစ်သော သား သမီး […]
မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်က နေအိမ် ၉ လုံး အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဖယ်ရှား၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်… မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်က ကျူးကျော် နေအိမ် ၉ လုံးကို ဒီနေ့မနက်ပိုင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရာမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ….. ။ မန္ထလေးတိုင်း ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ကျွန်းလုံးဥ […]
Facebook ​ပေါ်မှာ ခင်​တဲ့ အမျိုးသမီး​နောက်​လိုက်​ပါသွားပြီး ​ပျောက်​သွား တဲ့ ​ (၉) တန်း​ ကျောင်းသူ​ (၁၄) နှစ် ​အရွယ် မိန်းကလေး… Facebook လူမှုကွန်​ယက် ​မှာ ရင်းနှီးရာ က​နေ တဆင့်​ အလုပ်​ရမည်​ ဟု ​ပြောဆို ကာ လိမ်​လည်​​ခေါ်​ဆောင်​သွား […]
“မြမြကိုမုဒိမ်းကျင့်တဲ့မဒိမ်းကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့လူ၃ယောက်ရှာနေတဲ့ ညိုမင်းလွင်
“မြမြကိုမုဒိမ်းကျင့်တဲ့မဒိမ်းကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့လူ၃ယောက်ရှာနေတဲ့ ညိုမင်းလွင် ညကျောင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှရိုက်ကူးမည့် ” မြ ” ဇာတ်ကားတွင် ရုပ်ရှင်လောကမှမည်သူမှသရုပ်မဆောင်ရဲသော မုဒိန်းသမားတရားခံသုံးဦးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန် အသက်သုံးဆယ်မှလေးဆယ်ကြားအမျိုးသားသုံးဦးရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်၊မုဒိန်းမှုကိုအခြေခံသောဇာတ်လမ်းဖြစ်၍ အချို့သောအပြများတွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများပါဝင်နိူင်ပါသည် …. ။ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုရှိသော၊ သရုပ်ဆောင်ကိုသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်သာမြင်သော ဝါသနာရှင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြလျက် မျက်နှာပေါ်လွင်သောဓါတ်ပုံသုံးပုံနှင့်အတူ မြမြ Page Messenger သို့ သြဂတ်လ […]
၁ ပတ်အတွင်းမှာပဲ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ရပ်တန့်စေပြီး ဆံပင်ကိုထူလာစေမယ့် ကြက်ဥနဲ့ ပေါင်းတင်နည်း…
၁ ပတ်အတွင်းမှာပဲ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ရပ်တန့်စေပြီး ဆံပင်ကိုထူလာစေမယ့် ကြက်ဥနဲ့ ပေါင်းတင်နည်း… ဆံပင်ကျွတ်လို့ ဆံပင်ပါးလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ အကောင်းစားခေါင်းလျှော်ရည်တွေသုံးပေမယ့် ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သဘာဝနည်းလမ်းကို စမ်းကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်နော်.. ဆံပင်ကျွတ်တာသက်သာစေပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ဆံပင်ပါးတာကိုပါသက်သာစေမယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူတို့ စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် နော် …. ။ ကြက်ဥကို ဘာလို့ရွေးချယ်ရသလဲ။ […]